Dhimashadii Hay'adda Diiwaanka | Martech Zone
Arbacada, December 1, 2010 Khamiis, Juun 2, 2015 Douglas Karr
Muuqaalku wuxuu u nuuxnuuxsanayaa hay'adaha.
Toddobaadkii la soo dhaafey, waxaan ku jirey wax aan ka yarayn 5 wicitaanno iib ah halkaas oo rajadu ay horeyba u laheyd adeeg bixiye, dooranayo adeeg bixiye, ama horeyba hay'ad u lahayd. Waxaa na shaqaaleysay hal shirkad si aan kor ugu qaadno darajadooda mashiinka raadinta. Ka dib markaan dib u eegay boggooda daqiiqad ka yar, waxaan u ogeysiiyaa inay noqon doonto dadaal taariikhi ah oo la siiyay CMS-koodii hore. Waxay la xiriireen hay'addii u dhistay aaggooda waxayna wakaaladda si deg deg ah u siisay sicir kale si kor loogu qaado CMS cusub. Maxay hay'addaas hore ugu ogeysiin weyday?
Shirkad kale ayaa naga dhigtay inaan si taxaddar leh ugu shaqeyno barxadda wax lagu qoro. Dhibaatadu waxay ahayd in su'aalaha ay qabeen aysan la jaanqaadin meelaha ay ku xoogan yihiin. Maxay ugu baraarugi waayeen goobaha lagu iibiyo madasha? Waxay ahayd wicitaan deg deg ah oo kooxdu aysan si fiican u aqoonsanin baahida rajada iyo ilaha dhaqaale.
Waxaan ku dadaalaynaa shirkad kale inay dib u eegto codsi SaaS ah oo ay doonayaan inay iibsadaan. Shirkadda ayaa na shaqaaleysay sababtoo ah khibradayada ku aaddan booska SaaS iyo aqoonta tirada badan ee codsiyada suuqa. Waxay lahaayeen kooxo iyaga u gaar ah iyo tiknoolajiyad - laakiin wali waxay rabaan a cusub eeg.
Annagu ma nihin hay'addaada caadiga ah… ama sidaas ayaan is idhi. Warbixintii ugu dambeysay ee Warbaahinta Online ka eConsultancy, waxay aqoonsadeen isbeddellada hay'adaha iyo sida suuqleydu uga faa'iideysanayaan. Natiijooyinka waa kuwo qurux badan start oo la yaqaan!
Mar dambe ma jiri doonaan Is-dhexgalka Hay'adda Diiwaanka - Maaddaama shirkadaha wakaaladuhu ay xoojiyaan kheyraadkooda isla markaana ay hoos u dhigaan siloos, looma baahna doono in suuqleydu doortaan unug dijitaal ah "wakaaladda diiwaanka." (Tani waa marka laga soo tago xaqiiqda ah in fikradda ah "AOR" ay lumisay macnaheeda iyadoo suuqleyda ay doorteen inay ku faafiyaan miisaaniyadooda xayeysiiska dukaamo kala duwan. kala doortaan inta u dhexeysa hoosaadyada wakaaladda weyn ama u babac dhigaya hay'adaha dhaqameed si ay u koontaroolaan xisaabaadka shaqsiyeed ee warbaahinta.
Tirada tartanka ka mid ah dukaamada suuq geynta dijitaalka ah wuu ballaadhi doonaa - Loolanka dagaalka u dhexeeya gadashada warbaahinta dhaqanka iyo internetka ayaa laga dhex arki doonaa adduunka suuqgeynta ballaaran. Si kale haddii loo dhigo, maaddaama macaamiisha ay dalbanayaan qaab dhab ah "dhammaystiran" oo loogu talagalay suuq-geynta, dagaalka lagu hoggaaminayo olole waxaa qaadi doona oo keliya ragga iyo dumarka xayeysiiska ah, laakiin shirkadaha PR iyo guryaha hal-abuurka leh iyo takhasusyada warbaahinta bulshada ayaa sidoo kale.
Soo bixitaanka Hay'ad Kuxiran - Markay dagaalladani socdaan, qaab dhismeedka weyn ee shirkadda ayaa isku dayi doona inuu ka faa'iideysto qeybihiisa kala duwan si aan horay loo arag. Dabcan, sababta ay shirkadaha u hayaan shaqooyin badan oo suuqgeyn ah, hal abuur, qorsheyn iyo iibsi, illaa PR illaa suuq geynta iyo la tashiga maalgashiga waxay ahayd in la abuuro saameyn weyn oo Gestalt ah, halkaasoo guud ahaan ay ka weyn tahay wadarta qeybaheeda. Looma baahna in la sheego, in kasta oo ku dhowaad 30 sano ay ka shaqeynayeen qaabkaas, shirkado yar oo heysta ayaa run ahaantii sheegan kara inay gaareen hadafkan gaarka ah, in kasta oo hor u dhac la hubo in la sameeyay.
La bax qaamuuskii hore, ee cusub - Waagii hore, ereyada sida "GRPs," "dareensiinno" iyo "qasabno," ayaa u adeegay halbeegga cabbiraadda dhagaystayaasha marka la eego hagida kharashka iyo go'aaminta guusha ololaha. Muhiimadda ereyadan ayaa noqon doona mid aan muhiim ahayn. Waxay ku habboon yihiin in lagu beddelo fikradaha ah "qiimaha nolosha," "dareenka / fayoobaanta" iyo "saamaynta." Xitaa isticmaalka "dhagaystayaasha" waxay diyaar u yihiin qashin qubka taariikhda, maadaama ay tilmaamayso koox dad ah oo dadban. Xilliga internetka ee "ku tiirsanaanta" hal warbaahin iyo kor u kaca warbaahinta bulshada, erey ka saxsan oo lagu qeexayo macaamiisha uu suuqleydu doonayo inuu gaaro ayaa noqon doona "kaqeybgalayaasha."
Liiska laga soo xigtay Warbixinta Warbaahinta ee Internetka laga soo bilaabo eConsultancy.
Tani waa halkaa HighbridgeKobaca ayaa… ku jiray Hay'ad Kuxiran boos. Waxaan noqonay dhexdhexaadiye u dhexeeya kooxaha suuqgeynta iyo bixiyeyaasha adeegga iyo wax soo saarkooda, tartamayaasha, macaamiishooda, rajadooda, iibiyeyaashooda, shirkadaha PR iyo hay'adahooda. Waa waqti xiiso badan annaga oo aad u wanaagsan inaan ku aragno ansaxinta qaabkeenna ganacsi warbixintan.
Haddii aad tahay hay'ad - waa waqtigii aad beddeli lahayd qalabka, si kasta oo ay u adag tahayba. Waxaad ubaahantahay inaad lashaqeeysid iibiyeyaasha kale ee leh takhasusyo kaladuwan… xitaa hadii ay jiraan wax iskudhafan oo alaabooyinka wax lagu gado ah. Wada-tashiga ayaa ku jira. Haddii aad shirkad tahay - waa waqtigii aad dib uga fikiri lahayd kuwaaga Hay'adda Diiwaanka oo ka faa'iideysta kala duwanaanta xirfadlayaasha ah ee halkaa jooga kuwaas oo kaa caawin kara inaad ka guuleysato caqabadaha warbaahinta cusub.
Tags: U -doodahaxarfaha
Aug 16, 2012 at 11: 36 AM
Qoraal wanaagsan! Ku raaxee oo ku raac qodobbadaada muhiimka ah.
Oktoobar 3, 2012 at 9:54 AM
Runtii waan ku riyaaqay qoraalkan Douglas. Ma aragno wax aan ahayn wax wanaagsan markasta oo aan la xiriirno hay'ad kale.